HomeWararka MaantaKlopp Oo Hoosta Ka Xariiqay In Guusha Liverpool Cabsi Iyo Wel-wel Ku Abuurayso Chelsea
Kooxda dhar buluugleydu, waxay xiligan ku jiraan xaalad heer sare ah, waxaanay ku naaloonayaan hogaanka horyaalka, laakiin tabobaraha Liverpool wuxuu aaminsan yahay inay si uun cabsi ugu tahay guusha kooxdiisu ka gaadhay City.
Jurgen Klopp ayaa is weydiiyey bal in Liverpool cabsi ku kordhisay kooxda Chelsea oo ay daba dhiganayso, kadib markii ay maamusheen guul qurxoon oo 1-0 ah oo ay Mancehster City ka gaadheen.
Liverpool waxay ku negaatay inay lix dhibcood iska sii daba fadhido kooxda tabobare Antonio Conte, taas oo xidhay inay la simanto rikoodhkii 13 ka guulood ee xidhiidhka ah ee horyaalka u yaalay ahaa, kadib guushii Stoke City.
Mar la weydiiyey bal inay sii adkaynayaan soo gaabinta faraqa dhibcaha u dhexeeya iyaga iyo Chelsea, maadaama horyaalku marayo kala badh, Klopp wuxuu qiray inay adag tahay, laakiin wuxuu dhinaca kale xaqiijiyey inaanay fursad dambe ogolayn inay ka lunto.
“Uma malaynayo inaan u baahanahay wax kale oo dheeraad ah oo aan naftayda ku sii farax galiyo kadib guushii Man City,” ayuu ku yidhi shirkiisii jaraa’id ee ciyaarta kadib.
“Xaqiiqatan waan ogahay inaanan wax kale u baahnayn, marka waa hagaag. waa shaqo aad u adag, horena waan u sheegay inaanaan arimaha u qiyaasayn xaalada Chelsea.
“Dhabtii, waa koox aad u adag ilaa xad oo aan la malayn karin imikana orodkoodu saa’id yahay – hadda waxay guuleysteen, 12 kulan oo xidhiidh ah, ama 13 ba aan idhaahdo!
“Ma xuma, laakiin ma qiyaasi kartaa, inta ay kaa xanaajin karto ama kaa cabsiin karto, marka aad 13 ciyaarood oo xidhiidh ah adigoo badiyey ay wali jirto koox aad lix dhibcood oo kaliya ka horeyso oo sidaas kuugu dhegen.
“Laakiin hadana waxaan si fiican u hubbaa inaanay arintan sidaasba isugu mashquulinayn, marka anaga maxaa nagu mashquulinaya?
“Dhab ahaan waa arin aan muhiim ahayn dhacdooyinka imika ku mashquulkoodu, aan ka ahayn guulaha aanu labadayaduba gaadhayno.
“Waana taas waxa aanu aadka u xiisaynayno, horyaalkana waa mid adag, mid si aan la rumaysan karin u adag weeye.”
Juventus 3-2 Roma : Ciyaar 2 Casaan Ah La Bixiyey, 3 Rigoodhena La Qatbay
Fiji Oo U Gudubtay Semi-finalka Koobka Adduunka Ee Rugby-da Iyo New Zealdn Oo Oohin La Hoyatay
Xulka Qaranka England Oo Ciyaaro Saaxiibtinimo U Tegaya Waddanka Qatar